PressReader - Ilanga: 2017-10-09 - ABOLUNDI 10KM NESICELO KWI-KZNA
ABOLUNDI 10KM NESICELO KWI-KZNA
Ilanga - 2017-10-09 - Ezemidlalo - NHLANHLA HUDLA Ebika esoLundi
BAFAKE isicelo kwiKwaZuluNatal Athletics (KZNA) abagqugquzeli bomjaho uLundi Municipality 10km Challenge obungoMgqibelo uqala waphinda waphelela oLundi Regional Stadium, oNdini.
ILANGA lithole ukuthi abagqugquzeli balo mjaho obuqala ukuba khona nonyaka, bafake isicelo kwiKZNA sokuba welulwe ngonyaka ozayo kube yi-half marathon. Umjaho wanonyaka ubuhambisana ne-5km. Unqotshwe nguAnele Dlamini wePhantane Athletics Club ngesikhathi esingu-30:12, kwathi isibili sathathwa nguThobani Chagwe weMaxed ngesikhathi esingu-30:21 kanti isithathu kube nguSiphesihle Masondo wase-Utrecht ngesika-30:41.
Kwabesifazane kwi-10km ubhedu ludliwe nguJanet Mbhele waseMzimkhulu ngesikhathi esingu-35:19, isibili kwaba nguNwabi- sa Mjoli ngesika-36:57, isithathu kwaba nguSlindile Chili.
IMeya yasoNdini uWilson Ntshangase ithi inhloso yalo mjaho wukuthuthukisa ikakhulukazi abagijimi abakhele lo masipala namaphethelo.
“Ngaphandle nje kokuvundulula nokuthuthukisa amakhono entsha yakule ndawo, lo mjaho sifuna usize nasebekhulile ukuzigcina beqatha,” kusho iMeya uNtshangase.
Uthi banqume ukubeka imiklomelo emihle kulo mjaho ukuheha nabagijimi asebemnkantshubomvu kulo mkhakha ukuzoncintisana nabendawo okuvula namathuba ezokuvakasha.
USibusiso Nkabinde obhekele ezemidlalo kumasipala wasoNdini, uthe banethemba lokubona lo mjaho unqotshwa wumsubathi wendawo eminyakeni ezayo.
“Intsha yakule ndawo sifisa ikuqonde ukuthi kuyaphileka ngezemidlalo. Yingakho sisungule lo mjaho ukuyikhuthaza ukungena kwezemidlalo. Sifake isicelo kwiKZNA sokuba lo mjaho welulwe ngonyaka ozayo ube yihalf marathon,” kusho uNkabinde.
USello Mokoena onguMengameli weKZNA uncome kakhulu abadidiyeli balo mjaho ngokwenza umsebenzi oncomekayo ezeseka ngokuthi bewuhleleke kahle kakhulu njengoba uhambe ngaphandle kwezihibe yize ubugijinywa okokuqala.
“Ukubamba iqhaza kulo mjaho kwabagijimi abadumile njengoAnele benoThobani sibheke ukuba kukhuthaza intsha yakule ndawo ukuzimisela kulo mdlalo. Kungokokuqala ngqa ukuthi umjaho osendaweni yasemakhaya ukhiphe imiklomelo emihle ngalolu hlobo kwi-10km,” kusho uMokoena oncome nezinga eliphezulu lezokuphepha njengoba bengekho abasubathi abakhale ngokubanjwa inkunzi okuyinto eseyijwayelekile emijahweni ikakhulukazi yasemadolobheni amakhulu lapho kugqekezwa izimoto kwebiwe nezikhwama zabasubathi ngesikhathi semijaho.
Kunconywe nabashayeli bezimoto ngokuhlonipha abagijimi kulo mjaho okubhekwe ukuba ukhule ngesikhulu isivinini eminyakeni ezayo.
Le ndawo yasoNdini isizakhele igama kwezokugijima njengoba kunomjaho omkhulu ogijinywa minyaka yonke phakathi kwayo naKwaNongoma obizwa ngeZululand District Ultra Marathon. Kulo mjaho izingqwele zithola izimoto kanti ngonyaka ozayo kwenziwe isethembiso sokuthi zingase zihlomule ngezakwaBMW okokuqala ngqa emlandweni walo mjaho.
U-ANELE Dlamini onqobe uLundi Municipality 10km Challenge wamukela isheke kwiMeya yasoNdini uWilson Ntshangase, osizwa yisekela lakhe uNkk Gabi Madela noSello Mokoena ohola iKZNA.